Zazalahy kely mpianatra iray manodidina ny 10 taona no voahitsaky ny kamiao iray lehibe feno entana handeha hianatsimo ka nizara telo mihitsy ny vatany. Raha araka ny fanazavan’ireo fianakavian’ny maty dia handeha hividy zavatra io zazalahy kely io no izao tra-doza izao, trano fivarotana izay eo akaikin’ny trano fianarany ihany. Ny nofony efa niparitaka tao ambanin’ilay kamiao narahin’ireo rovitr’akanjo anefa sisa no hitan’ny fokonolona ka niantsoana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Raha araka ny vaovao azo hatrany moa dia efa niakatra teo anivon’ny Fitsarana ao Ambatolampy ny faran’ny herinandro teo ny raharaha. Miandry ny tena fampiharana ny lalàna marina ny fianakavian’ny maty izay nanantitrantitra fa nisahirana irery tamin’ny fikarakarana ny razana na dia efa tao anatin’ny fahoriana tanteraka aza. Raha araka ny fanazavan’ny fianakavian’ny maty hatrany moa dia ity kamiao ity no diso satria naka sisiny tany amin’ny lalan’ny mpandeha an-tongotra.